China Umzi mveliso wocingo olunaMatye kunye nabavelisi |Shengsong
Ucingo oluhlabayo lunokusetyenziswa ngokubanzi njengezincedisi kwiingcingo ezilukiweyo ukwenza inkqubo yokubiya okanye inkqubo yokhuseleko.Ibizwa ngokuba ngocingo oluhlabayo okanye imiqobo ehlabayo xa isetyenziswa nje ngokwayo ecaleni kodonga okanye isakhiwo ukunika uhlobo lokhuseleko.Ucingo oluhlabayo lukwabhalwa njenge tape ehlabayo njengoko luhlala lusetyenziswa emgceni ukwenza uhlobo lweteyiphu.
I-Barbed Wire Length Per Roll luhlobo olutsha locingo olukhuselayo olunoncedo olufana nenkangeleko entle, iindleko zoqoqosho kunye nokusebenza, kunye nolwakhiwo olufanelekileyo. Idlala indima yokhuseleko emigodini, emiyezweni nakumagumbi aqeshisayo, kumda, ukhuselo, kunye nokuvalwa kweentolongo.
I-DIP eshushu yocingo olunaMava olweNdwendwe lweSikhululo seSikhululo socingo loKhuseleko lweNtolongo
Izixhobo zocingo: Iingcingo zentsimbi, iPVC eqatywe intsimbi eblue, eluhlaza, emthubi kunye neminye imibala.
Ukhuseleko locingo:BWG4 ~ BWG18
Idayamitha yocingo:6mm ~ 1.2mm
1) ithambile: 380-550N / mm2
2) ngamandla :1200N/mm2
Izinto eziphathekayo:Iingcingo ze-GI ezishushu, iElector GI wire, SS wire, PVC coated wire, High steel wire
Iintlobo zokulukwa kocingo oluhlabayo:
1) ucingo oluhlabayo olunomtya omnye
2) ucingo oluhlabayo oluphindwe kabini
Usetyenziso:khusela umda wengca, umzila kaloliwe, uhola wendlela, umda wemilitary, amabanjwa, amaziko karhulumente.
Ukusetyenziswa:Isetyenziswa kakhulu kwibala lomkhosi, iintolongo, izindlu zokuvalelwa, izakhiwo zikarhulumente kunye nezinye iindawo zokhuseleko zelizwe.Kwiminyaka yakutshanje, iteyiphu ehlabayo ibonakala ibe yeyona nto idumileyo yocingo lokubiyela olukumgangatho ophezulu kungekuphela nje kwezicelo zomkhosi nokhuseleko lwesizwe, kodwa nakwindlu yangasese kunye nocingo loluntu, kunye nezinye izakhiwo zabucala.
Ngaphambili: Izikhonkwane zekhoyili
Okulandelayo: Incakuba yocingo